Mety hisy fiantraikany aminao ve ny Brexit ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jona 2019 3:09 GMT
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny vola Jona 2016)
Sary tao amin'ny freestocks.org. Azon'ny rehetra ampiasaina
Mpifidy mitotaly 52% tany Bretaina no nifidy ny handao ny Vondrona Eorôpeana tamin'ny 23 Jona 2016. Nahatonga ahiahy maro ity fanapahan-kevitra ity. Inona no hitranga amin'ireo olom-pirenena Eoropeana monina sy miasa any amin'ny Fanjakana Britanika? Ary ireo olom-pirenena Anglisy monina sy miasa any amin'ny firenena Eoropeana? Inona no hiafaran'ny Vondrona Eoropeana? Ary ny firaisan'ireo firenena – Angletera, Ekaosy, Pays de Galles sy Irlandy Avaratra – izay manambatra ny Fanjakana Britanika?
Nikaroka fijoroana vavolombelona avy amin'ny vondrom-piarahamonina mpikambana ato amin'ny Global Voices izahay mikasika ny mety ho fiantraikan'ny Brexit aminao. Nasaina handray anjara ireo izay naniry ny hahita ny fomba fijeriny momba izany tao anatin'ny lahatsoratra handraisana anjara amin'izany.
Antsafa 3 andro izay